Apple zvakare inobvisa iyo 5W magetsi adapter kubva kuEditions uye Hermès mamodheru | Ndinobva mac
Apple inobvisawo 5W magetsi adapter kubva kuEditions neHermès modhi
Chekupedzisira, iyo Cupertino kambani inobvisawo magetsi adapta yeiyo nyowani Apple Watch Series 6 Edition uye Apple Watch Hermès. Uye ndizvozvo mumamodeli ekutanga emawatch aya akatengeswa Apple akawedzera charger mubhokisi asi pakupedzisira zvinoita sekunge vabviswa.
Ongororo dzekutanga dzemawachi aya chiratidzo chekuti kambani yakawedzera majaja mukati mebhokisi. Chaizvoizvo manejimendi anga asinganzwisisike sezvo mamwe mamodheru asina kuwedzera, asi zvinogona kunzwisiswa kuti nekuda kwemutengo wakakwira weaya akasarudzika mamodheru akawedzerwa, ikozvino vafungisisa uye vakaiburitsa mubhokisi.
Irotari yeavo vakatenga iyo Apple Watch Edition kana Hermès pakutanga
Avo vakatenga wachi panguva yekuvhurwa kwayo (senge inozivikanwa YouTuber Victor Abarca) vanejaja inosanganisirwa, chimwe chinhu icho vamwe vese vashandisi vanoitenga vasazove nacho kubva zvino zvichienda mberi. Apple inowedzera rondedzero yezviri mukati mebhokisi aya emhando dzekutarisa uye mune idzi anototsanangudza kuti havana chaja:
Sechikamu cheyedu yekuyedza kuzadzisa zvinangwa zvedu zvakatipoteredza, Apple Watch haisanganisi magetsi adapter Ndokumbirawo shandisa adapter yemagetsi iripo kana kuwedzera imwe nyowani kutanga.
Zvese izvi kufamba kusinganzwisisike pachikamu cheApple uye chinhu chine musoro chingave chekuwedzera charger mumawachi. Asi rimwe dambudziko nderekuti tambo yekuchaja haina chiteshi che USB C, iri USB A, uye izvi zvinogona kuve dambudziko kune vazhinji vashandisi. Asi zvisinei neizvi, kiyi ndeyekuti kana ukaadzima unofanirwa kuzviita zvese pasina kusara Iwe haugone kusiya mamwe mamodheru hongu uye vamwe kwete nekuti iwo anodhura.
Isu tinotenda kuti Apple inogona kuita zvirinani mune izvi uye nekudaro ini pachangu ndinoshora danho rekuti ndisazowedzera magetsi adapter mumawachi. Chokwadi, kana iwe uine iPhone une charger, asi chokwadi ndechekuti mune inotevera iPhone 12 modhi pane runyerekupe nezve mukana wekubvisawo aya magetsi maap ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Apple inobvisawo 5W magetsi adapter kubva kuEditions neHermès modhi
Final Cut Pro inogadziridzwa kugadzirisa akasiyana mabugs
Apple Ine Mutsva Mutsva: "Mubatanidzwa weApp App Kurongeka"